Thenga Ijakhethi Eliwugqinsi Lesikhumba Elinebhande Elifudumele Labesifazane - Ukuthunyelwa Kwamahhala & Ayikho Intela | WoopShop®
Thenga Ngokuzethemba | Thola Izinto Ezimangalisayo
Akukho zindleko ze-VAT
Ijakhethi Eliwugqinsi Lesikhumba Elinebhande Elifudumele Labesifazane
$ 84.99 Intengo ejwayelekile $ 88.99
Usayizi XL S M L
I-Beige / XL mnyama / S I-Beige / M I-Beige / L mnyama / XL mnyama / M mnyama / L I-Beige / S
Ijakhethi Eliwugqinsi Lesikhumba Elinebhande Elifudumele Labesifazane - Beige / XL ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Isitayela: Izingubo zomgwaqo
Isizini: Ubusika, Autumn, Intwasahlobo
Ubude bezingubo: Kuvamile
Ubudala: Ubudala beminyaka eyi-18-45
Ikhola: Jika i-Collar
Uhlobo lokuvala: uziphu
Uhlobo lwento: Izingubo zangaphandle namajazi
Ubude beSleeve (cm): Kugcwele
Isitayela seSleeve: Ngokuvamile
Inombolo Yemodeli: B67234
Ubukhulu: Bukhulu (Ubusika)
Uhlobo Lwezingubo Zangaphandle: AmaJakhethi
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-77
Ngisothandweni nje! Ikhwalithi muhle kakhulu! Kuyafana nasesitolo! Phansi kancane, kepha kuyinhlebo! Siyabonga wooopshop! Ngijabule!
Ngisanda kugqoka leli bhantshi izolo futhi lilungele isimo sezulu esibandayo. Ngithole izincomo ezimbili kakade!
Ukulethwa kuthathe inyanga. On unkosikazi wakhe 160/60 92/68/96 uhlezi oversize. Kusukela ku-leatherette kuphela ibhande, okusele kuthiwa "i-plush". Ngokuvamile, ijazi eliphakathi.
Usayizi wami S, wayala usayizi we-M. futhi akazange alahlekelwe kakhulu nge-sweatshirt! iphasela elali-odwe ngo-September 18 lafika ngo-October 14 eSt.
I-WoopShop: Isiza Esiphezulu Sokuthengwa Kwe-Inthanethi kanye nokuthengiswayo. Isitolo esidayisa yonke impahla isekelwa yonke imikhiqizo. Sicela uxhumane nathi ngokuthenga okuningana okufana nezimpahla zezingubo, amagajethi, okuthengiswayo, okunempilo, okudayisa ngobuningi, okuthengisa imfashini, njll. Uma ungathanda ukuzwa okungcono kakhulu kokuthengwa online kwabesilisa, abesifazane, nezingane, usendaweni efanele. I-WoopShop iyindawo yokugcina yemfashini nendlela yokuphila, ibanjelwa izinto eziningi ezahlukahlukene okubandakanya okokugqoka, izicathulo, izesekeli, ubucwebe, imikhiqizo yokunakekelwa komuntu nokuningi. Isikhathi sokuchaza kabusha isitatimende sakho sesitayela ngomcebo wethu wezinto ezifashini. Isitolo sethu esiku-inthanethi sikulethela okwakamuva emikhiqizweni yabaklami ngaphandle kwezindlu zemfashini. Ungathenga ku-inthanethi kwaWoopShop kusuka enduduzo yekhaya lakho bese izintandokazi zakho zilethwa khona kanye emnyango wakho.Isiqephu Esingcono Kakhulu Sokuthenga ku-Inthanethi kanye nohlelo oluphezulu lwe-E-Commerce lweFeshiniKuba yizembatho, izicathulo noma izesekeli, iWoopShop ikunikeza inhlanganisela ekahle yemfashini futhi ukusebenza kwamadoda, abesifazane nezingane. Uzobona ukuthi isibhakabhaka siwumkhawulo uma kukhulunywa ngezinhlobo zezingubo ongazithenga ngezikhathi ezahlukahlukene.Izingubo zabesilisa ezihlakaniphile - KwaWoopShop uzothola izinketho eziningi kakhulu ngamahembe namabhulukwe ahlelekile, ama-T-shirts apholile nejean, noma inhlanganisela ye-kurta ne-pajama yamadoda. Gqoka isimo sakho sengqondo ngezikibha eziphrintiwe. Dala i-back-to-campus vibe enezikibha ze-varsity nama-jeans acindezelekile. Kungaba isitayela se-gingham, senyathi noma sefasitela lewindi, amahembe ahloliwe ahlakaniphile ngokunganqobeki. Zihlanganise nama-chinos, ama-jean ahlanganisiwe noma ibhulukwe elinqunyiwe ukuze ubukeke ngendlela engajwayelekile. Khetha ukubukeka okunesitayela okunamajakhethi ebhayisikili. Phuma endaweni lapho liguqubele khona ngesibindi kumajakhethi amelana namanzi. Dlulisa amehlo esigabeni sethu sezingubo zangaphakathi ukuthola izingubo ezisekelayo ezingakugcina uzethembile kunoma yikuphi ukugqoka. Izembatho zabesifazane bakaTrendy - Ukuthengwa kwe-inthanethi kwabesifazane eWoopShop kuyinto ephakamisa imizwa. Bheka i-hip futhi uhlale ukhululekile ngama-chinos nezikhindi eziphrintiwe kuleli hlobo. Bheka ushisayo ngosuku lwakho ugqoke ingubo emnyama encane, noma khetha izingubo ezibomvu ze-sassy vibe. Izindwangu ezinemigqa nezikibha zimele umoya wakudala wemfashini yasolwandle. Khetha izintandokazi zakho phakathi kweBardot, off-shoulder, isitayela sehembe, i-blouson, iziqongo ezifekethisiwe nezipulumu, ukubala ezimbalwa. Zihlanganise nama-jean, isiketi noma i-palazzos elingana kahle. AmaKurtis namajini enza inhlanganisela ephelele yokugqoka-yokugqoka yedolobha elipholile. Izinketho zethu ezinhle nezikhethiwe ze-lehenga-choli zilungele ukwenza isithombe emicimbini emikhulu yomphakathi efana nemishado. Amasethi ethu e-salwar-kameez, ama-kurtas namasudi ePatiala enza izinketho ezikahle zokugqoka njalo.Izicathulo ezifashini - Ngenkathi izingubo zenza indoda, uhlobo lwezicathulo ozigqokayo lukhombisa ubuntu bakho. Sikulethela uhlu oluphelele lwezinketho ezicathulweni ezingajwayelekile zamadoda afana neziteki nama-loafers. Yenza isitatimende samandla emsebenzini ugqoke ama-brogues nama-oxford. Zijwayeze imarathon yakho ngezicathulo zokugijima zabesilisa nabesifazane. Khetha izicathulo zemidlalo ngayinye efana nethenisi, ibhola, basketball nokunye okunjalo. Noma ngena kwisitayela esijwayelekile nokunethezeka okunikezwa izimbadada, izilayida, nama-flip-flops. Hlola uhlu lwethu lwezicathulo zemfashini zamantombazane kufaka phakathi amaphampu, amabhuzu ezithende, izithende zezinsimbi nezithende zepensela. Noma jabulela ukunethezeka nesitayela esihle kakhulu ngamafulethi ahlotshisiwe nensimbi.Izesekeli zesitayela - iWoopShop ingesinye sezindawo ezingcono kakhulu zokuthenga eziku-inthanethi zezesekeli zeklasi ezikusiza ngokuphelele izingubo zakho. Ungakhetha ama-smart analog noma amawashi edijithali bese uwafanisa namabhande nothayi. Thatha izikhwama ezibanzi, ojosaka, kanye nezikhwama zemali ukugcina izinto zakho ezibalulekile ngesitayela. Noma ngabe ukhetha ubucwebe obuncane noma izingcezu ezinkulu nezikhazimulayo, iqoqo lethu lobucwebe ku-intanethi likunikeza izinketho eziningi ezinhle.Ukuzijabulisa nokuzijabulisa - Ukuthengwa online kwezingane eWoopShop kuyinjabulo ephelele. Inkosazana yakho encane izothanda izinhlobo eziningi zezingubo ezinhle, izicathulo ze-ballerina, amabhande asekhanda neziqeshana. Thokozisa indodana yakho ngokuthatha izicathulo zezemidlalo, izikibha ezinkulu, amajezi ebhola nokunye okuningi esitolo sethu esiku-inthanethi. Bheka uhlu lwethu lwamathoyizi ongadala ngawo izinkumbulo ongazazisa.Ubuhle buqala lapha - Ungabuye uvuselele, uvuselele futhi uveze isikhumba esihle ngokunakekelwa komuntu siqu, ubuhle nemikhiqizo yokuzilungisa evela eWoopShop. Izinsipho zethu, ama-gels eshawa, okhilimu bokunakekelwa kwesikhumba, ama-lotion, neminye imikhiqizo ye-ayurvedic yakhelwe ngokukhethekile ukunciphisa umphumela wokuguga futhi inikeze okuhlangenwe nakho okuhle kokuhlanzwa. Gcina isikhumba sakho sekhanda sihlanzekile nezinwele zakho zi-uber-stylish ngezishampu nemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele. Khetha izimonyo ukuthuthukisa ubuhle bakho bemvelo.IWoopShop ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthenga eziku-inthanethi e-United States nase-Europe ezingasiza ukuguqula ngokuphelele izindawo zakho zokuhlala. Faka umbala nobuntu emakamelweni akho okulala ngendwangu yokulala namakhethini. Sebenzisa i-smart tableware ukujabulisa izivakashi zakho. Ukuhlobisa odongeni, amawashi, amafreyimu wezithombe, nezitshalo zokufakelwa nakanjani kuzophefumula impilo kunoma iliphi ikhona lekhaya lakho. Imfashini engabizi ezandleni zakho. I-WoopShop ingelinye lamasayithi wokuthenga online akhethekile emhlabeni lapho imfashini ifinyeleleka kubo bonke. Bheka abafikayo bethu ukubuka izingubo zomklami zakamuva, izicathulo, nezesekeli emakethe. Ungabeka izandla zakho kwisitayela esihamba phambili njalo ngesizini ekugqokeni. Ungathola futhi imfashini yobuhlanga ehamba phambili kuzo zonke izikhathi zemikhosi. Uqinisekile ukuthi uzohlabeka umxhwele ngezaphulelo zethu zonyaka zezicathulo, amabhulukwe, amahembe, ojosaka nokuningi. Ukuthengiswa kokuphela kwesizini kungokuhlangenwe nakho kokugcina lapho imfashini ifika ngentengo engakholeki ngokungakholeki. Thenga ku-inthanethi eWoopShop Ngokuqiniseka Okuphelele. Esinye isizathu esenza iWoopShop ibe ngcono kunazo zonke izitolo eziku-inthanethi ukulungela okuphelele okunikezwayo. Ungabuka imikhiqizo yakho oyithandayo ngezinketho zamanani wemikhiqizo ehlukile endaweni eyodwa. Isibonisi esisebenziseka kalula sizokuqondisa kunqubo yakho yokukhetha. Amashadi wosayizi ophelele, imininingwane yomkhiqizo nezithombe ezinokulungiswa okuphezulu zikusiza wenze izinqumo zokuthenga ezihamba phambili. Unenkululeko yokuzikhethela izinketho zakho zokukhokha, kungaba ikhadi noma ukulethwa kwemali. Inqubomgomo yokubuyisa yezinsuku eziyi-15 ikunikeza amandla amaningi njengomthengi. Ngokwengeziwe, inketho yokuzama nokuthenga yemikhiqizo ekhethiwe ithatha ubungani bamakhasimende ezingeni elilandelayo.Jabulela isipiliyoni esingenankinga njengoba uthenga kahle ekhaya lakho noma emsebenzini. Ungathenga futhi abangane bakho, umndeni nabathandekayo futhi uthole izinsizakalo zethu zezipho ngezikhathi ezikhethekile. Android | iOS
I-copyright HAWAFI GROUP LLC © 2021 I-WoopShop®.
Amakhasimende asilinganisela nge-4.9 / 5 ngokususelwa kuzibuyekezo ze-128909.
Izingubo Zokulala Zezingane Ezinise Zisethelwe Ubusika
Izinto ezibonakalayo zimnandi, zincane kunomcabango, umbala uphuzi ngokuphaphathekile, i-elastic ebhulukweni njengezinto ezibonakalayo Ukwelula kahle, ama-cuffs ezandleni nasemilenzeni awalulekile kakhulu. Kwa-Israyeli sizosebenzisa noma njengesendlalelo sesibili ebusika noma entwasahlobo, ibhantshi lingaba ngokwehlukana. Izimbobo zezinkinobho zejazi azicutshungulwa Ukwengeza, ngithemba ukuthi zizohlala zisetshenziswa. Usayizi unembile akwenzi mqondo ukuthatha ngaphezu kwe-US 3 izinyanga futhi mkhulu kakhulu, akukho iphunga.
I-Vintage Hollow Out Flare Sleeve Bandage Dress Nge-Corset
1M/2M/5M/10M/20M I-Copper Silver LED Fairy Lights
Ncoma kahle engangikulindele
Ishaja Ephathekayo Ephathekayo engu-10W 5V Ngaphandle Kwephaneli Yelanga
Isebenza ngempela, ifoni kufanele icishwe ngaphambi kokushaja. Kusukela ekukhanyeni kwe-LED akuthathi ukukhanya kwephaneli, kodwa kusukela ku-filament evamile-kalula (inkokhelo iyaqhubeka). Umthombo wemvelo wokukhanya awukakazami ukushajwa.
Umbala omuhle kakhulu, indwangu incane. Nakuba ibukeka inkulu, ayizange ilinganise. Ingane 1.3 futhi ukuphakama cishe 83 cm